ကင်မွန်းတော်ရွာ၊ ချောင်းဦးမြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 21°56′02″N 95°12′56″E﻿ / ﻿21.9339599609375°N 95.2156677246094°E﻿ / 21.9339599609375; 95.2156677246094ကိုဩဒိနိတ်: 21°56′02″N 95°12′56″E﻿ / ﻿21.9339599609375°N 95.2156677246094°E﻿ / 21.9339599609375; 95.2156677246094
ကင်မွန်းတော်ရွာ (အင်္ဂလိပ်: Kinmuntaw)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ကင်မွန်းတော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၅၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကင်မွန်းတော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၂၄ ဦး၊ မ ၁၉၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၇၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။ 
၂၀၂၁ ခု၊ မေလ ၂၇ ရက်၊ မနက် ၇ နာရီခန့်တွင် စစ်တပ်မှရောက်လာကာ အော်ဟစ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ သေနတ်ဖေါက်ခြင်းများပြုလုပ်၍ နေအိမ် ၃ လုံး ဖျက်ဆီးကာ ပြန်သည်။  ကင်မွန်းတော်ရွာတွင် ဆန္ဒပြမှုများလည်း မရှိသဖြင့် ရွာသားတို့မှာ ၎င်းတို့လုပ်ရပ်ကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရ၏။
↑ Place codes (Pcodes)။ Myanmar Information Management Unit (June 2020)။
↑ "စစ်ကိုင်း ချောင်းဦးမှာ နေအိမ်သုံးအိမ် ဖျက်ဆီးခံရ". RFA Burmese. 2021-05-27.
ကင်မွန်းတော်ရွာ၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ
ခရိုင်:မုံရွာခရိုင် မြို့: ချောင်းဦးမြို့
ဤ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တည်နေရာ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်မွန်းတော်ရွာ၊_ချောင်းဦးမြို့နယ်&oldid=684678" မှ ရယူရန်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပထဝီဝင် ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။